वीरगन्जकी कोरोना संक्रमित महिलाको पाटन अस्पतालमा मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
वीरगन्जकी कोरोना संक्रमित महिलाको पाटन अस्पतालमा मृत्यु !
वीरगन्जकी कोरोना संक्रमित एक महिलाको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । पाटन अस्पतालमा उपचाररत ६५ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु शर्माले बताएका छन् । वीरगन्जबाट काठमाडौं आएसँगै रुघाखोकीलगायत समस्या देखिएपछि उनी जाँच गराउन स्टार अस्पताल गएकी थिइन् ।
आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा नै सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनलाई स्टार अस्पतालमै भेन्टिलेटरमा राख्नुपरेको थियो । आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेकै अवस्थामा कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएपछि उनलाई पाटन अस्पतालको आईसीयूमा सारिएको थियो ।